TGP-085-XXBSS လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခွဲခြားစက် Terminal Blocks - ထိုင်ဝမ်အရည်အသွေးမြင့် TGP-085-XXBSS လျှပ်စစ်စွမ်းအား Splicer Terminal ပိတ်ပင်တားဆီးမှု OEM / ODM ထုတ်လုပ်သူ | Shine E & E INDUSTRIAL CO ။ , LTD
TGP-085-XXBSS လျှပ်စစ်ဓာတ်အား Splicer Terminal ကိုလုပ်ကွက် / SHINING E&E INDUSTRIAL သည်နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်လျှပ်စစ် Terminal Block, Fuse Holder, Fuse Block, Solid State Relay (SSR) ကိုကျွမ်းကျင်သောထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
TGP-085-XXBSS လျှပ်စစ်ဓာတ်အား Splicer Terminal ကိုလုပ်ကွက်
Home အမျိုးအစား Terminal လုပ်ကွက် Power Splicer Terminal လုပ်ကွက်များ TGP-085-XXBSS လျှပ်စစ်ဓာတ်အား Splicer Terminal ကိုလုပ်ကွက်
ထွန်းလင်းသော E&E TGP-085-XXBSS လျှပ်စစ်စွမ်းအားခွဲစက် Terminal Blocks Service နိဒါန်း
SHINING E&E INDUSTRIAL CO ။ , LTD သည်ထိုင်ဝမ် TGP-085-XXBSS လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့်တင်းစက် Terminal Blocks ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူနှင့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး ၃၅ နှစ်ကျော်သက်တမ်းရှိသည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှစ၍ လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းတွင် Shining E&E သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားအရည်အသွေးမြင့်မားသော TGP-085-XXBSS လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခွဲစက် Terminal Blocks များထုတ်လုပ်မှု ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးခဲ့သည်။ အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်နှစ် ၃၅ နှစ်အတွေ့အကြုံရှိပြီး Shining E&E သည်ဖောက်သည်တစ် ဦး စီ၏လိုအပ်ချက်ကိုအမြဲဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့်တင်းစက် Terminal Blocks (600V, 85A,2~ 8 Way)
TGP-085-04BSS Power Splicer လုပ်ကွက်များ
SHGING TGP-085-XXBSS စီးရီးပါဝါ Splicer Terminal Blocks အပါအဝင်
ပစ္စည်းအရေအတွက် - TGP-085-02BSS / TGP-085-03BSS / TGP-085-04BSS / TGP-085-05BSS / TGP-085-06BSS / TGP-085-07BSS / TGP-085-08BSS
Way (Pole):2~ 8 Way (Pole) ကိုရနိုင်သည်
1. ဝက်အူ: Slotted Set ကိုဝက်အူ (5 / 16-24)
2. ဝက်အူပစ္စည်း: အလွတ် = သံမဏိ; အက်စ်အက်စ် = သံမဏိ =
၃ ။ ရလဒ် ၁ လမ်း
လက်မှတ်: RoHS ။ ul / cUL ခွင့်ပြုချက်